Ciidamada Itoobiya Oo Ku Biiray Amisom, Laguna Wareejiyey Baay Iyo Bakool – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
22nd January 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Baydhabo- Mareeg.com: Ciidamada Ethiopia ayaa si rasmi ah maanta ugu biiray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), waxaana arrintaas looga dhawaaqay xaflad lagu qabtay magaalada Baydhabo ee axrrunta gobolka Baay.
Waxaa xafladaas looga dhawaaqay in amaanka Gobolada Bay iyo Bakool ee Koonfurta Soomaaliya lagu wareejiye ciidamada Itoobiya, waxaana arrintaas sheegay Afhayeenka AMISOM Col. Cali Aadan Xumad oo ku sigan Baydahbo.
“Ciidamada Itoobiya waxaa si rasmi ah maanta loogu xiray koofiyadda lagu yaqaan AMISOM ee cagaarka ah iyo calaamadda Midowga Afrika ee garabka lagu xirto. Dhammaan ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya waxay hoos imaanayaan howlgalka AMISOM,” ayuu yir afhayeenka AMISOM Col. Cali Aadan Xumud.
Col. Xumud ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya amaanka Baay iyo Bakaool kala wareegeen ciidamadii horay u joogay ee ka kala socday dalalka Uganda iyo Burundi.
“Ciidamadii Uganda iyo Burundi ee horay u joogay Degmooyinka ka tirsan Gobolka Bay waa laga wareejiyay halkaas, waxaana lagu wareejiyay kuwa Itoobiya oo si rasmi ah uga mid noqoday AMISOM,” ayuu yiri afhayeenka AMISOM oo la hadlay BBC.
“Gobollada Bay, Bakool iyo Jubbooyinka waa qaybta saddexaad ee Afarta qaybood ee loo qaybiyay howlgalka Midowga Afrika, qaybtaas ayaana wixii maanta ka dambeeya ka howlgalayaan ciidamada Itoobiya, kuwii horay ugu sugnaa gobolladaasna qaybo kale ayaa loo wareejinayaan si ay uga howl-galaan,” ayuu afhayeenku hadalkiisa ku daray.
Ciidamada Itoobiya ee labu biiriyey howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa ah 4,395 askari, waxaana AMISOM sheegtay in kusoo biiritaanka ciidamadin ka saacidi doonto sidii Alshabaab looga saari lahaa gobollada ay maamulaan oo ay ugu horeeyaan qeybo ka mid ah labada Shabeelle.
Golaha Wasiirrada Soomaaliya Maanta La dhaariyey